इलिनोइसमा क्यानाबिस खेती विशेषाधिकार कर के हो?
क्यानाबिस खेती विशेषाधिकार कर - इलिनोइसमा भांग खेती विशेषाधिकार कर र भांग खरीददार उत्पादन शुल्कको बारेमा कानूनले के भन्छ?
इलिनोइसमा भांग खेती विशेषाधिकार कर र भांग खरीददार उत्पादन शुल्कको बारेमा कानूनले के भन्छ?
अनुच्छेद and० र 60 ले इलिनोइसमा भांग व्यवसायहरूमा कसरी कर लगाईएको छ भन्ने भंग गर्दछ। सेक्शन ० मा इलिनोइसमा भांग खेती विशेषाधिकार करको बारेमा कुरा गरिएको छ, जसले कति कर लगाईन्छ, के उत्पादनहरू करको लागि योग्य छन् साथै भुक्तानी कसरी गरिन्छ र क्यानाबिस खेती गर्नेहरूद्वारा फिर्ता फाइल गरिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ। धारा, 65, अर्कोतर्फ, इलिनोइसमा क्यानाबिस खरीददार एक्साइज करको वर्णन गर्दछ, यसले के समावेश गर्दछ र यो कसरी गांजा खरीदकर्ताहरूबाट संकलन गरिन्छ।
इलिनोइसमा लेख 60० र taxes 65 करहरूको बारेमा थप जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
सेप्टेम्बर १ of 2019 From को पहिलो दिनदेखि इलिनोइसका खेतालाहरूले भांगको पहिलो बिक्रीमा%% भांग खेती सुविधा सुविधा लगाइनेछ। राजस्व विभागले भांगको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार सुरक्षित गरेको छ;
(i) विक्रेता र खरीददार सम्बद्ध हुन्छन्
(ii) भांगको स्थानान्तरण भुजाको लम्बाइ लेनदेनबाट हुँदैन
(iii) एक खरिदकर्ताले भांगलाई उनीहरूको आफ्नै प्रबन्धक संस्थामा सार्छ वा भ्यागुताको मूल्य स्थापना गर्न सकिदैन।
लेख थप प्रदान गर्दछ कि विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य समान गुण, चरित्र, र क्षेत्र मा प्रयोग को साथ अन्य उत्पादनहरु को मूल्य को अनुरूप हुनु पर्छ। र यदि त्यस्ता कुनै उत्पादनहरू छैनन् भने विभागले इलिनोइसका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उत्पादनहरू विचार गर्न सक्दछ।
इलिनोइसमा क्यानाबिस खेती विशेषाधिकार कर अन्तर्गत, यो लागी कर तिर्ने पहिलो बिक्री (कृषक) बनाउने व्यक्तिको उत्तरदायित्व हो। त्यसपछिका खरीददारहरू जस्तो प्रसंस्करण संगठनहरू यो कर भुक्तान गर्न योग्य छैनन्। यद्यपि कानूनले कृषकहरूलाई उनीहरूको मूल्यमा थप कर दायित्व चार्ज गरेर प्रतिपूर्ति गर्न अनुमति दिन्छ।
इलिनोइसमा भांग खेती विशेषाधिकार कर तिर्ने सबै भांगका किसानहरूले राजस्व विभागमार्फत प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिन आवश्यक छ। यी आवेदनहरू विभागको आवश्यकता अनुसार अनलाइन बनाउनुपर्नेछ।
यो नोट गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ कि क्यानाबिस रेगुलेसन र कर ऐन अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त आवेदकहरूले मात्र प्रमाणपत्र प्रस्ताव गर्न योग्य हुन सक्छन्।
फर्क र भुक्तानी खेती खेती विशेषाधिकार करको
व्यक्ति, जो इलिनिसमा भांग खेती सुविधा कर तिर्दछन्, अघिल्लो महिनाको लागि प्रत्येक २० औँ वा अघि फिर्ताको लागि आवश्यक छ। फिर्तीले बताउनु पर्छ:
(१) करदाताको नाम;
(२) करदाताको ठेगाना, र व्यावसायको भौतिक ठेगाना;
()) गत महिनाको लागि भांगको मासिक बिक्री रसिदहरू;
()) समय बिक्रीबाट प्राप्त रकम;
()) कानून द्वारा आवश्यक कटौती;
()) फाईलिंग महिना पछिको महिनाको जम्मा रसिदहरू जुन कर गणना गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ;
()) कर तिर्नु पर्ने रकम;
()) करदाताको हस्ताक्षर; र
()) विभाग द्वारा आवश्यक हुन सक्ने अन्य कुनै पनि विवरणहरू।
सबै फिर्ताको र भुक्तानी इलेक्ट्रॉनिक गरिनु पर्छ। इलेक्ट्रोनिक रूपमा भुक्तान गर्न गाह्रो लाग्ने करदाताहरूले विभागलाई इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्मको माफीका लागि अनुरोध गर्न सक्दछन्।
त्यस्ता करदाताहरूले आफ्नो फिर्ता रिटर्न फाइल गर्न वा मेडिकल क्यानाबिस पायलट प्रोग्राम ऐनको करुणामूलक प्रयोग ऐन अन्तर्गत करको फिर्ताको साथ जोड्न आवश्यक छ।
कर भुक्तानीकर्ताहरूले त्रैमासिक भुक्तानी गर्न आवश्यक छ मिति 7, १ 15, २२, र प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनमा। यदि कुनै करदाता समयमै त्रैमासिक भुक्तानी गर्न असफल हुन्छ वा आवश्यक पर्ने भन्दा थोरै रकम भुक्तानी गर्छ भने उसले दण्ड वा रुचिहरूको सामना गर्न सक्छ। यदि भुक्तानी गरिएको शुल्कले कर दायित्व भन्दा बढी पायो भने, कसैले भुक्तान मिति पछि days० दिनको म्याद समाप्त हुनु अघि क्रेडिट ज्ञापनपत्र अनुरोध गर्न सक्छ।
क्यानाबिस खेती सुविधा करको लागि सबै भुक्तानी क्यानाबिस रेगुलेसन कोषमा सारिएको छ।
इलिनोइसमा क्यानाबिस खरीदकर्ता एक्साइज करको गठन?
इलिनोइसमा क्यानाबिस खरीददार आबकारी कर जनवरी १, २०२० देखि लागु हुने छ। कर भैँसीलाई विभिन्न दरहरूमा कर लगाइनेछ;
(१) can 1% वा सो भन्दा कम समायोजित डेल्टा-t-टेट्राहाइड्रोकाबिनोल स्तरको साथ, एउटा क्यानबिस-इन्फ्यूज गरिएको उत्पाद बाहेक कुनै भांगले एउटा कर आर्जित गर्नेछ जुन भांगको लागतको १०% हुनेछ।
(२) can 2% माथिको समायोजित डेल्टा---टेट्राहाइड्रोकाबिनोल स्तरको साथ, एउटा क्यानाबिस-संचार उत्पाद बाहेक कुनै भांगले एउटा कर तिर्नेछ जुन भांगको लागतको २%% हुनेछ; र
()) क्यानाबिस-संचारित उत्पादनलाई खरीद रकमको २०% कर लगाइनेछ।
इलिनोइसमा क्यानाबिस खरीदकर्ता एक्साइज कर कसरी स .्कलन गरियो
ऐनका अनुसार खरीददार एक्साइज कर खुद्रा विक्रेताहरूबाट संकलन गरिन्छ। तिनीहरूले यो खरीददारहरूले विक्रेताबाट भांग प्राप्त गर्न तिर्ने मूल्यमा एक कर दायित्व थपेर यसो गर्छन्।
संकलित करको रकम माथि उल्लेखित दरहरूमा शुल्क लिइन्छ, जुन त्यसपछि राजस्व विभागमा पठाइनु पर्छ।
यदि एक खुद्रा विक्रेताले इलिनोइसमा क्यानाबिस खरीददार एक्साइज करलाई चाहिने भन्दा बढी कर लाग्छ भने, ग्राहकलाई फिर्ताको लागि अनुरोध गर्ने अधिकार छ। र यस्तो अवस्थामा जहाँ क्रेताले कर चार्ज लगाउँदैन, त्यसपछि खरीददारले भुक्तान गर्नुपर्नेछ महिनाको २० तारीख भन्दा अगाडि खरीद महिना।
संविधानका अनुसार, इलिनोइसमा क्यानाबिस खरीददार उत्पादन शुल्क स to्कलन गर्ने खुद्रा विक्रेताको जिम्मेवारी छ। क्यानाबिस रिटेलरले कर सlects्कलन गर्दछ वा गर्दैन, सबै करहरू जम्मा गर्नुपर्नेछ कि aणमा अनुवाद हुनेछ जुन खुद्रा विक्रेताले राज्यलाई तिर्नु पर्छ।
क्यानाबिस रिटेलरहरूको पंजीकरण
क्यानाबिस रेगुलेसन र कर ऐन अन्तर्गत कर संकलन गर्ने सबै फुटकर बिक्रीकर्ताहरूले प्रमाणीकरणको लागि इलेक्ट्रोनिक रूपमा आवेदन दिनुपर्दछ।
संविधानले भनेको छ कि खुद्रा विक्रेता प्रमाणीकरणको लागि योग्य हुन, उनीहरु लाईसेन्स हुनु पर्छ।
प्रत्येक खुद्रा विक्रेताले खरीद भैरहेको, होल्ड गरिएको, बेचेको, वा निलम्बन गरिएको भांगको सही रेकर्ड राख्न आवश्यक छ। उनीहरूले सबै इनभ्वाइसहरू, बिक्री रेकर्डहरू, बिलहरू, र अन्य प्रासंगिक कागजातहरू पनि किन्नुपर्दछ जुन कि बिक्रीको बिक्री र भांगको बिक्रीसँग सम्बन्धित छ।
खरिदका यी कागजातहरू लाइसेन्स प्राप्त परिसरमा खरीदको दिनदेखि days ० दिन भन्दा कमसम्म राख्नुपर्नेछ जबसम्म त्यहाँ लेखी पठाईएको राजस्व विभागबाट छुट हुँदैन।
कागजातहरू नियमित व्यापार घण्टाको समयमा परिसरमा उपस्थित हुनुपर्दछ र विभागका कर्मचारीहरू र अधिकृत एजेन्टहरूबाट निरीक्षणका लागि उपलब्ध हुनुपर्दछ।
डिपार्टमेन्टका कर्मचारीहरुसँग पक्राउ गर्न, भांग व्यवसाय खोज्न, वा यो ऐनको कुनै पनि प्रावधानको उल्लंघन गर्ने खुद्रा विक्रेताबाट भांग जफत गर्ने शक्ति छ।
इलिनोइसमा यसको प्रयोग नियमित गर्न भांगमा लगाईएको करहरू कृषक र भांग खरिदकर्तालाई सोझै लगाइन्छन्। गाँजाको खेती गर्नेले बालीबाट कमाउने सुअवसरको लागि इलिनोइसमा भांगको खेती विशेषाधिकार कर तिर्छ, जबकि खरीदकर्ताले इलिनोइसमा भांगको उपयोग गर्न पाउने सुविधाको लागि क्यानाबिस खरीददार उत्पादन शुल्क तिर्छ।